News Collection: मेरो जवानी कहाँ गएको छ र ?
मेरो जवानी कहाँ गएको छ र ?
महानायक राजेश हमालले दर्जनौं पटक विवाह गरे। थुप्रै नायिकासँग प्रेम गरे, रोमान्स गरे अनि सुहागरात पनि मनाए, तर ती सबै पर्दामा सीमित थिए, चलचित्रका लागि गरिएका अभिनय मात्र थिए। ५० वर्षको उमेरमा पनि यी हेन्डसम नायक किन अविवाहित छन् ? प्रेम र विवाहबाट यी नायक किन सधैं भागिरहन्छन् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र सुनिन्छ तर भ्यालेन्टाइन्स डेको पूर्व सन्ध्यामा साप्ताहिकका सहकर्मी कृष्ण भट्टराई तथा विदुर खतिवडासँग राजेश हमाल करिब दुई घण्टा गफिए। कुराकानीको मुख्य विषय राजेश हमालको प्रेम-जीवनमा केन्द्रित थियो। पूर्वी नेपालकी बाहुन परिवारकी एक युवतीसँग विगत ५ वर्षदेखि प्रेम गरिरहेका महानायक हमालले आगामी एक वर्षभित्रमा उनलाई दुलही बनाउने निर्णय गरिसकेको कुरा पनि बताए। राजेश हमालसँग कुराकानीको मुख्य अंशः
पहिलो चुम्बन गर्दा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो ?
भारतको नयाँ दिल्लीमा कक्षा १ मा पढ्थेँ। मैले चुम्बन गरेकी पहिलो केटी पनि १ कक्षामै पढ्थिन्। म त्यस्तै ६ वर्षको थिएँ होला।
त्यति कम उमेरको चुम्बन पनि सम्झना छ ?
वास्तवमा त्यो एउटा सरप्राइज चुम्बन थियो। हाम्रो स्कुलको प्यारेन्ट्स डेको अन्त्यमा ती अफ्रिकन बालिकाले मेरो गालामा चुम्बन गरेकी थिइन्।
किशोरावस्थाको कुनै चुम्बन सम्झनुहुन्छ ?
म त्यसबेला १४ वर्षको थिएँ। त्यो चुम्बन मैले रूसमा गरेको थिएँ। म एउटी विदेशी केटीसँग नजिकिएको थिएँ, चुम्बनको अर्थ बुझेपछिको पहिलो चुम्बन त्यही थियो तर पत्याउनु हुन्न होला, प्रेममा चुम्बन पछि के-के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मलाई त्यसबेलासम्म थाहा थिएन।
अनि वयष्क भएपछिको चुम्बन ?
भारतको चण्डीगढमा म १७ वर्षको छँदा एउटी २२ वर्षकी युवतीसँग प्रेम गर्थें। रातीको समय थियो, उनैको कारमा बसेर हामी एक-अर्कालाई चुम्बन गरिरहेका थियौं। बाहिरबाट एउटा प्रहरीले कारको शिशामा डण्डाले टक टक गर्दै सोधेको थियो— 'अन्दर क्या हो रहा है ?'
अनि तपाईंहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
हामीले चाँडै विवाह गर्दैछौं भनेर ढाट्यौं। मैले पहिलो पटक चुम्बन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यही बेला अनुभव गर्ने मौका पाएको थिएँ।
तपाईंले वास्तविक जीवनमा गरेका चुम्बनहरू नेपाली चलचित्रका लागि उपयोगी भए कि भएनन् ?
हरेक चलचित्रमा नायकले नायिकालाई चुम्बन गर्नै पर्छ भन्ने छैन। कथामा आवश्यक छ र पात्रमा स्वभाविक लाग्छ भने त्यस्ता दृृश्य समावेश गर्नु ठूलो कुरा होइन।
कुनचाहिं चलचित्रको चुम्बन दृश्य तपाईंलाई सान्दर्भिक लागेको थियो ?
पहिले-पहिले चलचित्रमा चुम्बन दृश्य खासै आवश्यक मानिँदैनथ्यो। मैले पहिलो पटक चलचित्र 'द युगदेखि युगसम्म' मा नायिका नन्दिता केसीलाई चुम्बन गरेको थिएँ। अहिले नयाँ पुस्ताका निर्देशकहरूले चलचित्रमा त्यस्ता दृश्य राख्न थालेका छन्। पछिल्लो पटक मलाई निर्देशक उकेश दाहालले पनि चलचित्र 'किन किन' मा नायिका करिश्मा मानन्धरसँग चुम्बन गराएका छन्।
प्रेममा चुम्बनको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
चुम्बन शुद्ध प्रेम व्यक्त गर्ने एउटा राम्रो माध्यम हो, तर मैले टिनएजसम्म जति वटा चुम्बन गरें, ती सबै कामचलाउ थिए, गम्भीर प्रेमको परिणाम थिएनन्।
अहिले आएर चुम्बनको अर्थ कसरी बुझ्नुभएको छ ?
मेरो विचारमा कुनै पनि पुरुष र महिलाबीच यौनसम्बन्ध भन्दा भावनामा डुबेर गरिएको चुम्बनमा बढी प्रभावकारीता, आत्मियता तथा भावनात्मकता हुन्छ। प्रेममा यौन टाढाको कुरा हुन्छ। प्रेमलाई यौनले भन्दा पनि चुम्बनले अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ।
प्रेमलाई कसरी परिभाषित गर्नु हुन्छ ?
प्रेम विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। प्रेमका विभिन्न रूप हुन्छन्। तपाईंको आशय महिला र पुरुषबीचको प्रेम भन्ने मैले बुझेको छु। समय र उमेर अनुसार प्रेमलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। म पनि जीवनमा विभिन्न चरणका प्रेमबाट गुज्रिएको छु।
कस्ता-कस्ता चरणबाट गुज्रनुभयो ?
म १४ वर्षको छँदा रुसमा एउटी विदेशी केटीप्रति आकषिर्त थिएँ। त्यसबेला त्यो नै प्रेम हो जस्तो लागेको थियो। १७ वर्षको छँदा चण्डिगढमा एउटी युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध थियो। त्यसबेला पनि त्यही नै प्रेम हो जस्तो लाग्थ्यो। मैले पहिलो चलचित्र 'युगदेखि युगसम्म' मा अभिनय गर्दा पनि म एउटी अस्ट्रेलियन युवतीसँगको प्रेममा थिएँ। उनीसँगको प्रेम केही हदसम्म प्रेरणादायी पनि थियो। म अहिले जीवनको यो मोडमा आइपुगेको छु। म यति बेला पनि एउटा अनौठो प्रेममा परेको छु।
अहिलेको प्रेमलाई चाहिं कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
रमाइलो कुरा के छ भने, म अहिले जोसँग प्रेम गरिरहेको छु, उहाँसँग प्रेम गरेपछि यसअघिका सबै प्रेम फिक्का थिए जस्तो लागिरहेको छ।
भन्नाले, अहिलेको प्रेम चाहिं वास्तवमै गम्भिर प्रकृतिको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
लगभग त्यस्तै हो। अहिले म जुन उमेरमा छु, यतिबेला आएर गरिएको प्रेमले चाहिं एउटा सार्थक रूप लिन्छ भन्ने लागिरहेको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामीले एउटा विन्दुमा पुगेर यो प्रेमलाई विवाहकै रुप दिने निर्णय पनि गरिरहेका छौं।
अहिलेको प्रेमप्रति तपाईं यति धेरै कन्फिडेन्ट कसरी हुनुभयो ?
किनभने अहिलेको प्रेममा एक प्रकारको समर्पण छ। उनले मप्रति देखाएको समर्पण, त्यो पनि निःस्वार्थ भावनाको समर्पण।
जीवनमा प्रेमको महत्व कति हुँदो रहेछ ?
मैले प्रेम एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझ्न थालेको छु। वास्तवमा अहिलेसम्म म अत्यन्त कठोर भएर प्रेमबाट टाढा भागेको व्यक्ति होइन, तर यसो भन्नेबित्तिकै म बुझ्दै नबुझी अन्धाधुन्ध प्रेम गर्ने मान्छे पनि होइन।
प्रेममा मानिस कसरी पर्दो रहेछ ?
मलाई प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। प्रेम गर्दा मान्छे चुजी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। अचेल म मात्र होइन कसैले पनि अन्धो भएर प्रेम गर्दैन। पहिले-पहिले एरेञ्ज म्यारिज बढी हुन्थे, अहिले लभ म्यारिजको चलन छ। प्रेम गर्दा प्रेमी-प्रेमिकाले नै एकअर्कालाई तौलेर मात्र गर्छन्, मैले पनि करिब-करिब त्यस्तै गरेको छु।
प्रेममा मान्छे पागल हुन्छ कि हुँदैन ?
हुन्छ। मेरो अनुभव मानिस प्रेममा पागल हुन्छ। माया गरिरहेको व्यक्तिलाई गुमाउनुपर्दाको पीडाले मान्छे पागलपनको हदसम्म पुग्नसक्छ।
तपाईंले अहिले प्रेम गरिरहनु भएकी युवतीसँग पहिलो भेट कसरी भएको थियो ?
एउटा सामाजिक जमघटमा भेट भएको हो। काठमाडौंको कुनै एउटा पाँचतारे होटलमा एउटा जमघट थियो। संयोगले म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो देखादेख भयो। यो करिब ५ वर्षअघिको कुरा हो।
पहिलो भेट त त्यसरी भयो, त्यसपछि के के भयो ?
त्यो पार्टीमा उहाँ (राजेशकी प्रेमिका) को उमेरका थुप्रै युवती थिए, यद्यपि उहाँमा मेरो नजर किन र कसरी केन्द्रित भयो, मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। केही समयको कुराकानीपछि मैले उहाँलाई आफ्नो भिजिटिङ कार्ड दिएँ र कुनै दिन फुर्सद भयो र मलाई सम्झनु भयो भने फोन गर्नु होला भनेँ। तपाईं पत्याउनु हुन्न होला, मैले त्यसरी कुनै युवतीलाई पहिलो पटक आफ्नो भिजिटिङ कार्ड दिएको थिए।
पार्टीमा धेरै युवती थिए भन्दै हुनुहुन्छ, ती युवतीसँग मात्र कसरी आकषिर्त हुनु भयो ?
त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँ उहाँको उमेरका धेरै युवती थिए तर उहाँमा जुन प्रकारको आकर्षण मैले देखें, त्यो अरु कसैमा देखिनँ।
तपाईंले दिएको भिजिटिङ कार्डले कहिले आएर नतिजा देखायो ?
त्यो पार्टी सकिएको धेरै भैसकेको थियो। एक दिन एकाबिहानै एउटा फोन आयो, त्यो फोन तीनै युवतीको थियो जसलाई मैले आफ्नो भिजिटिङ कार्ड दिएको थिएँ। वास्तवमा त्यो फोनले एउटा सुनौलो बिहानी लिएर आएको रहेछ। अर्को रमाइलो कुरा के छ भने, त्यो फोन आएको भोलिपल्टै मेरो बर्थडे थियो।
पहिलो टेलिफोन वार्ता कस्तो रह्यो ?
भोलिपल्ट मेरो बर्थ डे परेकाले मैले कफीका लागि प्रस्ताव राखेँ। उनले त्यो प्रस्ताव स्विकार गरिन्।
तपाईंको जन्म दिनमा उनीसँगको पहिलो औपचारिक भेट कस्तो रह्यो ?
मैले अनुमान गरेभन्दा रमाइलो भयो। हामीले लाजिम्पाटस्थित एउटा होटलको क्याफेमा बसेर कफी पियौं। सामान्य गफगाफ भयो।
कफी पिउने क्रममा उनका बारेमा के-के कुरा बुझ्ने मौका पाउनुभयो ?
पार्टीपछिको पहिलो भेटमा सामान्य कुराकानीका क्रममै मैले उनी प्लस टु सकेर बसेको, उमेर करिब १९-२० वर्ष भएको थाहा पाएँ।
पछिल्लो समयमा उनको शैक्षिक योग्यता कति छ ?
अहिले मास्र्टस गर्दै हुनुहुन्छ। उमेर करिव २५ वर्ष भएको हुनुपर्छ।
अचेल कत्तिको भेटघाट हुन्छ ?
प्रायः भैरहन्छ। विकेन्डमा खासगरी शुक्रवार साँझ हामी भेट्छौं।
अचेल तपाईंहरूबीच कस्ता कुराकानी हुन्छन् ?
हामी टिनएजर केटा-केटी होइनौं त्यसैले अल्लारे गफ त हुँदैन। प्रायः गम्भिर विषयमै छलफल हुन्छ।
अब उनैसँग तपाईंको विवाह पक्का हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छ ?
हन्ड्रेड पर्सेन्ट त कुनै पनि कुरामा ग्यारेन्टी हुँदैन। ९९ अथवा ९८ प्रतिशत पक्का छ भन्दा फरक पर्दैन। हामी दुवै जना विवाहका लागि मानसिक रुपले तयार भैसकेका छौं। यद्यपि विभिन्न कारणले वर्ष २०१२ को अन्त्य अथवा २०१३ को प्रारम्भमा मात्र हामीले विवाह गर्ने निर्णय गरेका छौं।
अहिले आएर प्रेममा पर्नुभएको छ। अझ टिनएजरझैं जवान देखिनुभएको छ। के प्रेमबिना जीवन अधुरो रहेछ भन्ने महसुस गर्नुभएको हो ?
अहिले आएर चाहिं यो कुरा सही जस्तो लाग्न थालेको छ। वास्तवमै प्रेम बिना जीवन अधुरो नै हुने रहेछ। 'लेटर द बेटर' भन्छन् , हो ठ्याक्कै त्यस्तै अनुभव भैरहेको छ। देर आए दुरुस्त आए।
उनको के कुरा मन पर्छ ?
यही नै भन्ने छैन। मलाई उहाँ 'प्याकेज' मै राम्री लाग्छ। ठ्याक्कै भन्नु पर्दा चाहिँ उहाँको चरित्र सबैभन्दा बढि मनपर्छ। सुन्दरताको कुरा त त्यसपछि मात्र आउँछ।
उनको शरीरको कुन अंग बढी मनपर्छ ?
त्यस्तो विशेषगरी एउटै अंग भन्ने छैन। उहाँको फिगर नै आकर्षक छ अर्थात उहाँको शारीरिक बनावटप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन।
उनको मनपर्ने अन्य पक्ष ?
म संग गर्ने व्यवहार। उहाँमा कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन। उहाँको निस्वार्थीपन पनि मलाई असाध्यै मनपर्छ।
तपाईंहरू एक-अर्कालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
(हांसो...) म प्रायः तपाईं भनेर सम्बोधन गर्छु। कहिलेकाहीं तिमी पनि भनिदिन्छु। तर उहाँले 'हजुर' भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ।
तपाईंहरूको उमेरमा धेरै ग्याप छ जस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो अनुभव नै गरेको छैन। अँ... सुरु-सुरुमा उहाँसँग भेट हुँदा केही असहज महसुस नभएको होइन। -लामो हाँसो हाँस्दै) हैन...मेरो पनि जवानी त गैसकेको छैन नि। म अहिले पनि जवान नै छु नि...छैन र ?
यो उमेरको प्रेमलाई कतै बन्धनका रूपमा लिनु भएको छ कि ?
त्यस्तो अनुभव गरेको छैन। जीवनको यो मोडमा अन्य कुरामा रुचि छैन। फेरी टिनएजरको जस्तो एसएमएस, च्याट, दिनदिनै भेट गर्ने भन्ने हुँदैन। अनुकूल समय मिलाएर हामी हप्तामा एक पटक भेट्छौं। आफ्ना कुराहरू सेयर गर्छौं। वास्तवमा मलाई अहिले फ्रिडम नै किन चाहियो र ?
नढाँटी भन्नुहोस् त, उहाँसंग बाहेक अहिले तपाईं अन्य कुनै महिलासँग पनि नजिकिनुभएको त छैन ?
मैले ढाँट्नै पर्दैन। यदि त्यस्तो भएको भए त सबैभन्दा पहिले त तपाईंहरूलाई नै जानकारी हुन्थ्यो नि !
तपाईंहरूबीच अहिलेसम्म शारीरिक सम्पर्क भएको छ कि छैन ?
हा हा हा...अलि बढी नै पेल्नु भयो कि ? अहिले त्यो कुरा 'ब्याक सिट' मै छ। त्यो एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो जसका लागि हामी हतारिएका छैनौं। रुचि र चाहना नभएको होइन, तर त्यसलाई च्यानलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा ठूलो हो।
अहिले त डेटिङ नै सेक्सका लागि गरिने ट्रेन्ड छ नि ?
त्यो युवापुस्ताका लागि होला। उमेरको यो मोडमा म नियन्त्रित जीवन बाँचिरहेको छु।
यौन-सम्बन्ध र प्रेम-सम्बन्धमा के भिन्नता छ ?
प्रेमीहरूको जीवनमा यौनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ तर यौन-जीवनमा प्रेम हुनै पर्छ भन्ने छैन। अर्थात प्रेम र सेक्स दुई भिन्न कुरा हुन्।
तपाईंको विचारमा सेक्स चाहिं के हो त ?
एउटा बायोलोजिकल निड हो। एउटा समझदारी पनि हो। जीवन बिताउने पक्का भएपछि एउटी महिला र पुरुषबीच हुने एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हो।
दाम्पत्य जीवन कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
सही जीवनसाथी भेटिएपछि जीवनमा एक पटक मानिसले यो जीवन बाँच्नै पर्छ। मेरो दाम्पत्य जीवन पक्कै पनि शान्तिपूर्ण, सुमधुर तथा दिगो हुनेछ भन्ने अनुमान गरेको छु।
कुनै बेला विवाहको कुरै सुन्न मान्नुहुन्नथ्यो, ढोकै बन्द गर्नुभएको थियो। अहिले एकाएक कसरी परिवर्तन आयो ?
हरेक मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको स्वार्थ लुकेको हुन्छ। ममा पनि थिए। म आफ्नो जीवन साथीमा विभिन्न कुरा खोजिरहेको थिएँ। प्राथमिकता, समझदारी जस्ता मूलभूत कुरा खोजिरहेको थिएँ। अहिले ती सबै कुरा एउटा व्यक्तिमा पाएपछि विवाहका लागि तयार भएको हुँ।
तपाईं प्रायः परिपक्व र अपरिपक्व प्रेमको कुरा गर्नुहुन्छ ? प्रेम पनि परिपक्व र अपरिपक्व हुन्छ र ?
हुन्छ, परिपक्व प्रेम र अपरिपक्व प्रेममा धेरै अन्तर छ। परिपक्व प्रेमको भविष्य सुखद हुन्छ, अपरिपक्व प्रेमको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्न सकिंदैन। वैवाहिक जीवन सफल बनाउन परिवक्व प्रेमको आवश्यकता पर्छ। तपाईं पत्याउनु हुन्न होला, म अहिले पनि आफूलाई प्रेममा अपरिपक्व मानिरहेको छु। वास्तवमा हाम्रो प्रेम 'म्याचोड' हुनै बाँकि छ।
आफ्नो रोजाइप्रति खुसी हुनुहुन्छ ?
खुसीभन्दा पनि ठीक उमेरमा आएर प्रेम गरिरहेको छु जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ।
तपाईंहरूको प्रेमको सार्थक गन्तव्य के हो ?
मैल अघि नै भनिसकें, वर्ष २०१२ को अन्त्यतिर हामी विवाह गर्दैछौं। विवाह नै हाम्रो प्रेमको सार्थक गन्तब्य हो।
तपाईंलाई कता-कता विवाहदेखि डर पनि लागिरहेको हुनुपर्छ, होइन ?
तपाईंको प्रश्न शतप्रतिशत गलतचाहिं होइन। लामो समयदेखि एक्लो जीवन बाँचेको, एक्लै बसेको मान्छेलाई एकै पटक विवाहित जीवनमा प्रवेश गर्न गाह्रो त भैहाल्छ। केही हिच्किचाहट त भैरहेको छ तर आफूले मन पराएको मान्छेसँग बस्नुपरेपछि अलि अलि कम्प्रमाइज त गर्नै पर्‍यो नि।
सेलिब्रेटीहरूको वैवाहिक जीवन असफल भैरहेकाले पनि डर लागेको हो कि ?
ठ्याक्कै त्यस्तो पनि होइन, तर मैले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई 'लो-प्रोफाइल' मै राख्ने निर्णय गरेको छु।
विवाह स्वर्गमै तय हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
यसअघि गर्दिन थिएँ तर अहिले गर्न थालेको छु। मलाई अहिले उहाँसँगको निकटतापछि विवाह स्वर्गमै तय हुँदो रहेछ भन्ने लागिरहेको छ।
विगतमा प्रायः विदेशी युवतीहरूसँग नजिकिनुभयो, अहिले आएर नेपाली युवतीसँगै विवाह गर्ने निर्णय गर्नुभयो नि ?
यो पनि एउटा संयोग कै कुरा हो। वास्तवमा विवाह र प्रेममा यो देश र त्यो देश भन्ने हुँदैन। विचार र मन मिल्नु ठूलो कुरा हो, तर म आफूलाई भाग्यमानी मानिरहेको छु कि मैले विवाह गर्न लागेकी युवती नेपाली हुन्। आखिर 'यो मन त मेरो नेपाली हो'।
तपाईंसंगै पढेका अधिकांश साथीले विदेशी युवतीहरू विवाह गरेको बताउनुभयो, तपाईंले पनि विदेशी युवती नै विवाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?
मेरा जति पनि साथीले विदेशी युवतीसँग विवाह गरे, तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतको डिभोर्स पनि भैसकेको छ। मलाई विवाह गर्ने उपयुक्त युवती नेपाली नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अन्त्यमा, विवाहपछि सन्तानका बारेमा पनि केही योजना बनाउनुभएको छ कि ?
त्यो त विवाहपछिको कुरा भै हाल्यो नि ! हामीले अहिले नै त्यस्तो सपना देखेका छैनौं।